पात्र होईन प्रवृती फेरिनु पर्छ -
पात्र होईन प्रवृती फेरिनु पर्छ
२० माघ २०७२, बुधबार १३:३१ February 3, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on पात्र होईन प्रवृती फेरिनु पर्छ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरमा आयोजीत विवाह पञ्चमी उत्सवमा सहभागी हुने क्रममा मधेशी मोर्चाको नामबाट कार्गेटमा पेट्रोल बम प्रहार भयो । उनी सहभागी भएर फर्किए पछि अनेक लाल्छना लगाउँदै मन्दिरमा गंगाजल छर्किईयो । एकल महिला मन्दिरमा प्रवेश गरेको भनि अमानविय शव्दहरु राष्ट्रप्रमुखको गालिमा खर्चियो । यस घटनाको स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहबाट चर्को बिरोध भई रहेको छ । सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ भने प्रहरीले केहि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । राष्ट्रप्रमुख माथिको सो घट्नाको बिभिन्न महिला संगठनहरुले पनि बिरोध गरि रहेका छन् । प्रस्तुत छ, बिरोधका कार्यक्रम तथा समसामयीक गतिविधीबारे झापाको विर्तामोड निवाशी अखिल नेपाल महिला संघ झापाकी अध्यक्ष जसमायाँ गजमेरसँगको यो कुराकानी :
राष्ट्रप्रमुख माथिको अपमान र आक्रमण प्रयासको बिरोधमा महिलाहरुले प्रदर्शन गरि रहेका छन्, दोषि माथि कार्वाहीको माग गर्दै किन प्रदर्शन गर्नु प¥यो ? सरकारले सोझै दोषिलाई कार्वाही गरे हुँदैन र ?
जनकपुरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि जुन आक्रमणको प्रयास र उहाँ हिडे पछि जुन प्रकारका मानवियतामानैं कलंक राख्ने घट्ना भए यि सवै बिरोधका मात्र बिषय होईनन् । समग्र महिला, त्यसमाथि एकल महिला माथि समाजको एउटा तप्काले कस्तो दृष्टिकोण राख्दो रहेछ अझै, यस घटनाले देखाएको छ । यदि विद्या भण्डारीको स्थानमा कोहि पुरुष राष्ट्रपति भई दिएको भए कसैले बिरोध प्रदर्शन र ज्ञापन पत्र बुझाउनै पर्ने थिएन । त्यसैले समग्र नीति निर्माण र राज्यमा पात्र होईन प्रवृती फेरिनु पर्छ भन्ने देखाएको छ । त्यसैले हामी अहिले दोषिमाथि कार्वाहीको माग गर्दै आन्दोलन गरि रहेका छौं ।
अहिले सरकारमा सामेल दलकै महिला संगठनहरु आन्दोलनमा छन् । तर प्रधानमन्त्री एमालेकै, राष्ट्रपतिनैं पनि एमालेबाटै सो स्थानमा पुग्नु भएको, गृहमन्त्री एमाओवादीको अनि ति दलकै महिलाहरुले आन्दोलन गर्नु र माग राख्नु पर्ने कसलाई हो ?
पछिल्लो पटक राष्ट्रपति प्रति जुन घट्ना भयो र त्यस पछि जसरी अन्य घट्नाक्रम हरु विकास भए यसले त समग्र नेपाली समाजको चित्रण गरि रहेको छ । हो, सरकारमा सामेल दलकै महिला संगठनहरु अहिले कार्वाहीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छौं । हुन त केहि पक्राउ परे र सरकारले छानविन समिति पनि बनाई सकेको छ । त्यसैले आशा गरौं राष्ट्रपति प्रति दुव्र्यभार गर्नेहरुले कार्वाही त पाउलान् । तर यस प्रकारका घट्ना हामीले थाहै नपाई समाजमा कति भई रहेका हुन्छन् । विधुवाका नाममा अझै पनि नेपाली महिलाहरु परिवार भित्रैबाट हिंसा सहन बाध्य छन् भन्ने देखायोे यो घटनाले । राष्ट्रप्रमुखलाई त्यो निच स्तरको लाल्छना लाउन आँट गर्नेले विपन्न, ग्रामिण र असहाय महिलाहरु माथि झन कस्तो दृष्टिकोण राखेका होलान् ? महिला माथि अझै कायम त्यस प्रकारका दृष्टिकोणहरु भत्काईन आवश्यक छ भन्ने ध्यय हो हाम्रो ।
अहिलेको प्रदर्शन र बिरोध बाहेक नियमित रुपमा चाँहि अनेमसंघले झापामा के गरि रहेको छ ?
हामीले संगठनलाई जिवन्त र चलायमान राख्न बिभिन्न नियमित कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । खास गरि संगठन सुदृढिकरण, महिला हिंसाको अन्त्य र महिला शसक्तिकरणका लागि हाम्रा कार्यक्रहरु केन्द्रित रहने गरेका छन् । यसका लागि संगठन निर्माण, परिचालन, सदस्यता विस्तार तथा युवामाझ अनेमसंघलाई स्थापित गराउन हामी बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरि रहेका छौं ।
झापाकै राजनीतिमा पनि महिलाहरु केहि वर्ष क्रियाशिल रहने तर नेतृत्वमा पुग्न नसकि राजनीतिबाट किनारा पुग्ने अवस्था पनि देखिएको छ, किन हुन्छ यस्तो ?
स्वभाविक रुपमानैं महिलाहरु माथि पुरुषहरुको भन्दा धेरैनै दायित्वहरु हुन्छन् । युवा अवस्था सम्म पढ्ने, बुवाआमा तथा दाजुभाइको निर्देशन अनुसार चल्नु पर्ने । विवाह गरे पछि श्रीमान र सासुससुराको निर्देशन अनुसार चल्नु पर्ने । सन्तान जन्माउनु र हुर्काउने पर्ने अनि त्यस पछि उनीहरुको शिक्षा दिक्षामा केन्द्रित हुनु पर्ने । यि सवै जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीतिमा स्थापित हुनु निश्चयनै कठिनाईको बिषय हो । तर अहिले धेरै महिलासाथीहरु राजनीतिमा आई रहनु भएको छ । क्षमतावान पनि हुनुहुन्छ । हाम्रै पार्टीमा धेरै महिलाहरु छौं । अब आशा गरौं, पहिलाको जस्तो नहोला । महिलाहरु पनि नेतृत्वमा स्थापित हुँदै जानेछन् ।
शिक्षा, राजनीति तथा सामाजीक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागीता बढि रहेको छ तर पनि महिला माथि हुने हिंसा किन रोकिन सकेको छैन, यसका लागि अनेमसंघ के गर्दैछ ?
हाम्रो संगठन त स्थापनाकाल देखिनैं महिला अधिकार स्थापना र हिंसा नियन्त्रणका लागि क्रियाशिल रहँदै आएको छ । अझै पनि त्यसका लागि बिभिन्न कार्यक्रम गरि रहेको छ । तर समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढे पनि हिंसा नरोकिनुको कारण भने एउटा तथ्याङ्कगत बिषय पनि हुन सक्छ । हिजो महिलाहरु अनेक यातना पाउँथे, हिंसा पाउँथे तर आफ्नै भाग्यलाई दोष दिएर जीवन भरि सहि रहन्थे । तर अहिले कम्तिमा हिंसा सहनु हुन्न र न्यायका लागि उजुरी गर्नु पर्छ भन्ने चेतना बढेको छ । यसरी हेर्दा उजुरीको चेतनाका कारणले पनि केहि वर्ष अघि सम्म उजुरीनैं नगर्ने, बाहिरनैं नल्याउने प्रवृती रहेको भन्दा त बढेको देखिन सक्ला । र अर्को कुरा हिंसा नियन्त्रण शिक्षा लिएर वा दिएर मात्रै नहुने रहेछ । दाईजो, सन्तान वा अन्य बिषयमा विपन्न र अशिक्षित परिवारमा मात्र होईन सम्पन्न र शिक्षित परिवारमा पनि महिला माथि हिंसा भई रहेका छन् । त्यसैले हिंसा नियन्त्रणका लागि शिक्षा मात्र होईन चेतनाको खाँचो देखिन्छ ।
प्राक्सिस एकेडिमी खेल मय
नायिका पुजा भट्ट संगको अन्तरबार्ता
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार १५:३४ October 6, 2017 wwwmophasal
२० कार्तिक २०७५, मंगलवार १७:५३ November 6, 2018 wwwmophasal
अरुको अन्तर्वाता बढेर नै गायक बनेँ – टंक बुढाथोकी
२१ चैत्र २०७२, आईतवार १९:०३ April 3, 2016 wwwmophasal